Ọnọdụ dara na ndị merụrụ ahụ maka ndị agadi na ndị okenye | Ngwọta OMG
Ihe egwu na ihe ojoo nye ndi agadi na ndi okenye
Ọnụ ọgụgụ nke ọdịda na-abawanye ụba kwa afọ.
Ihe dịka otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị nọ n'afọ 65 dị afọ ọ bụla. Ihe ize ndụ a na-abawanye na mmụba nke afọ. A chọpụtala na n'ime afọ 80, ihe dị ka ọkara nke ndị mmadụ na-enwe nsogbu.
Ọtụtụ n'ime ndị dara adịghị akọ. Ọtụtụ n'ime ndị mmadụ na-eleghara ọdịda anya. Ha na-eche na nke a bụ ihe mgbaàmà nkịtị nke afọ.
A chọpụtala na ndị a napụrụ n'ụlọ ọgwụ (ndị a kwetara na ha ga-agbawa agba) (ihe dịka 53% nke ndị agadi) nwere ike ịdaghachi n'ime ọnwa ole na ole sochirinụ.
Ihe dị gburugburu 87% nke ọdịiche n'etiti ndị agadi na-adaba na ọdịda.
25% nke ndị mmadụ nabatara na ụlọ ọgwụ n'ihi ịda. 40% nke ndi mmadu kwetara na ha adighizi enwe ike ibi ndu onwe ha. Na, 25% ha na-anwụ n'ime otu afọ.
Ọtụtụ n'ime ndị dara adaghị emerụ ọ bụla ma gburugburu 47% nke mmerụ ahụ n'ime ahụ n'ihi enweghị ike ịgwọ ọrịa n'enweghị enyemaka.
Ndị na-enweghị ike iguzo onwe ha mgbe ha daa, nwere mmetụta ọjọọ na ndụ ha. Mgbaji nke ngwongwo muscle amalite n'ime 30 - 60 nkeji nke ọdịda. Nke a nwere ike ibute ọrịa oyi baa na mmiri oyi, mmiri ọgwụ, na mmiri na nsogbu ndị ọzọ metụtara ya.
Ahụhụ na Canada
Ihe nde mmadu iri nde mmadu iri nde mmadu n'ime umuaka nke 4.27 ma obu n'elu na-enwe mmerụ nke siri ike iji kpachapu ihe omume ha kwa ubochi. E nweela mmụba nke mmerụ ruo 12% ma e jiri ya tụnyere nke ahụ na 2 (2001% n'afọ 15 - 2009). Ọzọkwa, a na-ewere ya na ọ ga-eto ruo 2010% site na njedebe nke 18.
Ndị na-eto eto nọ n'afọ 12 - 19 nwere ohere kachasị na ha merụrụ ahụ. 27% nke afọ a (12 - 19) na-enwe mmerụ nke okpukpu abụọ ma e jiri ya tụnyere ndị okenye (14%), na ugboro atọ ma e jiri ya tụnyere ndị agadi (9%).
66% nke mmerụ ahụ n'etiti ndị na-eto eto kpatara n'ihi egwuregwu. N'ime ndị okenye (20 - 64) 47% nke mmerụ ahụ kpatara n'ihi egwuregwu na ọrụ. Ebe n'etiti ọgbọ ndị okenye (> 64) 55% nke mmerụ ahụ kpatara n'ihi ọdịda.
N'ozuzu ya, ọ bụrụ na anyị ahụ, mgbe ahụ, ọtụtụ ọnyá kpatara kpatara ya.
Ụlọ ọgwụ na-ada na Fall na afọ 65
Ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọgwụ na-ada
Ụdị ọdịda nke afọ 65
Kedu ihe ndị na-akpata ịda?
Ihe ndị metụtara ịda
Nzuzo 10588 11 Echiche Taa